အကောင်းဆုံးတညျးရာမိန်းမသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးလိင် stimulator ကစားစရာများနှင့်အစေ့ vibrator အဘို့ကမ်းလှမ်း
အပေါ် Posted အောက်တိုဘာလ 12, 2017 သြဂုတ်လ 22, 2018 by san က DRA - မှတ်ချက် Leave
doc ဂျွန်ဆင်တညျးရာဆာရှာ Grey က Ur3 Cream Pie Pocket Pussy
သငျသညျတကယ် Doc ဂျွန်ဆင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေချင်ပါတယ်ထက်သင်မိန်းကလေးတစ်ဦး pickin များအတွက်ခံစားချက်အတွက်အစစ်အမှန်anice တင်းကျပ်စွာ pussy ၏ခံစားချက်မဟုတ်ဘဲကြိုက်နှစ်သက်လျှင်။
ဒါဟာအသေးဖုံးကွယ်ဖို့လွယ်ကူပေမယ့်သင်ကအစစ်အမှန်သဘောတူညီချက်ဖြစ်ခဲ့သည်များကဲ့သို့အပျော်အပါးပေးကမ်းခြင်း၌ကြီးမားသော LS ။
အပေါ် Posted အောက်တိုဘာလ 12, 2017 အောက်တိုဘာလ 12, 2017 by san က DRA - မှတ်ချက် Leave
Tenga သုညကမ်ဘာပျေါမှာအကောင်းဆုံးတညျးရာ Flip ။
Tenga သုည Flip
မကြာခင်မှာပဲဒီမှာ Tenga Flip သုညတွေအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီအခိုက်မှာကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးတညျးရာ။
သင်က orde ကြိုက်သည်မှန်လျှင်, jij ယခုဝယ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယခုရောင်းချဘို့ဖြစ်တယ်, ik ကျနော်တို့မကြာခင်ဒီထုတ်ကုန်နှင့်သင်၏ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်အတွေ့အကြုံများကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သေးအကောင်းဆုံးသောပစ္စည်းများနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကိုအသုံးပြုခြင်း, TENGA, အ Flip ZERO အမျိုးသားပျော်ရွှင်မှုနည်းပညာအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်တင်ဆက်ဖို့ဂုဏ်ယူသည်။
TENGA အပျော်အပါးသစ်အထွဋ်ရန်၎င်း၏ထူးခြားသော Flip စီးရီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
အဆိုပါ Flip0(ZERO) အကြီးအအာရုံခံစားမှုအဘို့အသေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အများဆုံးအနုစိတ်ပြည်တွင်းရေးအသေးစိတ်ကို features, ငါတို့ရှေ့ဆောင် Flip-ပွင့်လင်းတဲ့ function မျိုးစုံအသုံးပြုမှုများအတွက်ပစ္စည်းကျန်းမာရေးနှင့်မကိုက်ညီသောစောင့်ရှောက်။
အနုစိတ်ပြည်တွင်းရေးအသေးစိတ်ကို featuring Tenga ကနေနယူး Ergonomics နှင့်ပြန်သုံးနိုင်သောပရီမီယံအထီးတညျးရာ
အသေးစိတ်အတွင်းစိတ် elastomer အများအပြား features အသစ်တွေကိုရှိပါတယ်: အ Ridge အမှတ်တရရဲ့ပျြောမှေ့စကုန်းနှစ်ဖက်စလုံးမှသင်တို့ကိုပွေ့ဖက်။ rippling အနားလှုံ့ဆော်နေချိန်တွင်အဆိုပါဂယက်ထခုံးသင့်ရဲ့ရိုးတံမှဆုပ်ကိုင်ထားတုန်းပါပဲ။ တစ်ဦးပြင်အလွှာအားလုံးထောင့်ကနေလှုံ့ဆော်ပေးသောအဆုံး orb ဖုံးလွှမ်း။
Tenga Flip ZERO, နမူနာစက်ဆီချောဆီနှင့်သိုလှောင်မှု / ခြောက်သွေ့မှုအတွက်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အမှုလည်းပါဝင်သည်
Categories: အထီးတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, Uncategorized
စအိုတညျးရာ Fleshlight လိင်တူချစ်သူ Fleshjack
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စအိုနှင့်လိင်တူချစ်သူချစ်သူများအဘို့အ te fleshjack masturbater ကောင်းတဲ့တင်းကျပ်စွာနည်းနည်းအပေါက်ထိုးဖောက်မှခံစားရန်ပြီးပြည့်စုံအလေ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုသင်ပိုကြီးတဲ့ pussy ထက်တစ်ဦးတင်းကျပ်စွာစအိုထဲမှာဒါမှပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်သင့်ရဲ့အော်ဂဇင်ရပါလိမ့်မယ်ကြောင်းကိုငါသိ၏။
ဒီစအိုကသင်၏လုံလေ့ကျင့်နှင့်သင့်အော်ဂဇင်အပေါ်ကျင်းပရန်သင်ယူဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း fleshlight ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
Tags: စအို, fleshlight, လိင်တူချစ်သူ, တညျးရာ
အကြှနျုပျ၏မြည်းကိုလိင်တံ Stroker ဖြည့်ပါ
အကြှနျုပျ၏မြည်းကိုလိင်တံ Stroker ဖြည့်ပါ၏အင်္ဂါရပ်များ
တဦးတည်းအနေဖြင့် chiselled, တင်းကျပ်စွာပါး၏ pair တစုံသင်တို့အဘို့၏စိတ်ကူးယဉ်သူတို့၏ချယ်ရီတက်ပေးခြင်း
အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းကိုဘယ်သူမှ သိ. လိုအပ်သည်ပါ!
Lube သင့်ရဲ့စိုက်ထူဖွင့်ခြင်းနှင့်နက်ရှိုင်းသော, မိမိ၏ကညာပူဖောင်းတင်းပါးသို့နစ်။7incher ထူကြောင်း
နက်ရှိုင်းသောအတွင်းပိုင်း။ သငျသညျပင်သွေးကြော pop အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်တိုင်းအရသာအသေးစိတ်ခံစားရနိုင်သည်! ဒါဟာနှင့်တကွကြွလာ
ပဲသင်၏ကိုယ်ပိုင် prying ဆိတ်ကွယ်ရာကသူ့၏အရည်ရွှမ်းဖုများကဲ့သို့တူညီ fleshy texture ရှိခြင်းထုဆစ်ခေါင်းကို
သငျသညျနိဗ္ဗာန်သို့ပယ် stroking ့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီဒါပေမဲ့ကြောင်းကိုလူသားရဲ့မြည်းကိုခေတ္တရပ်တန့်ပြီးအဖြစ်ပါးရိုက်
ဿုံပုံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမသာလိမ့်မည်ခံစားရပေမယ့်လည်းကိုယ့်အစစ်အမှန်အရာကဲ့သို့မြည်။ သငျသညျကျိန်ဆိုလိမ့်မယ်
•အခမဲ့ lube လည်းပါဝင်သည်
•စူပါပျော့ကြောင်း Fanta သား TPR သုံးပြီးပုံသွင်း
•ရုပ်သံလိုင်းအတွင်းပိုင်းတိုင်းလေဖြတ်နှင့်အတူအန္တိမဆွပေးခြင်းများအတွက် textured ပါလိမ့်မည်
•7လက်မကြက်ခြင်းဖြင့်ကို tick2များအတွက်တင်းကျပ်စွာလူကိုမြည်းကိုပါးနှင့်အတူပူးတွဲပါလာဖမ်းဆုပ်များအတွက်
•စအို entry ကိုကြက်စွပ်အိတ်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါသည်
•ငါ့အမြည်းကိုလိင်တံ stroker ဖြည့်ပါ
ယခုအချိန်တွင် မှစ. ရုံက၎င်း၏သေတ္တာနှင့်မြတ်နိုးကနေဖယ်ရှားပစ်, ငါ့မြည်းကိုလိင်တံ stroker ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဖြည့်ပါ
ထိုသို့ heft ။ အသုံးပြုသူများသည်အခမဲ့ lube နမူနာအတူကတက် lube နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာစူပါပျော့ fanta နှင့်အတူပတ်ရစ်ကောင်းပါသည်
သင်တို့အ stiffie န်းကျင်အမဲသားအဖြစ်တိုင်းလေဖြတ်နှင့်အတူအသီးအသီးလက်မမှတွယ်ကပ်။ ထို့ကြောင့်မိမိအပြန့်နှံ့
ပါးပြင်ကိုသင် pop-မပါဘဲမှီတိုင်အောင်မည်သည့်စိုးရိမ်ပူပန်သည်သူ၏မြည်းကိုရိုက်တာ, ကစုပ်!
စင်ကြယ်သော ups SNAP ။ ထည့်သွင်းကြောင်းအခမဲ့ကစားစရာသန့်စင်၏အသုံးပြုမှုကို Make နှင့်အချို့သောနွေးဆပ်ပြာယူ
ရေ။ ပထမဦးစွာပြုလုပ်သုတ်ခြင်း, အခြောက်အ Pat, သင်ဒီကနေငါ့အမြည်းကိုလိင်တံ stroker မကောင်းတဲ့ assaway ဖြည့်ပါသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်
တဦးတည်းန်းကျင်အထိရောက်ရှိနေစဉ်အတွင်းတင်းကျပ်စွာသောမြည်းပေါ် bareback သွားအဖြစ်အဘို့အဖြေတတ်ပြီးသူတို့ရဲ့ပှေ့
သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတူခက်ခဲကြက်ငါ၏အ add လိင်တံ stroker ဖြည့်ပါ။ သူသည်ယနေ့ဥစ္စာ၏အမိန့်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်။
သောကြောင့်ထုတ်လုပ်သူစျေးနှုန်းမူဝါဒများ, ကုမ္ပဏီ (ထပ်မံ) အားလုံးပေးနိုငျဘဲဖြစ်ပါတယ်
ဆာရှာ Grey ကနက်ရှိုင်းသောလည်ချောင်း Pocket Pal
ဆာရှာတို့က Grey ကနက်ရှိုင်းသောလည်ချောင်း Pocket Pal ၏အင်္ဂါရပ်များ
ယခုတွင်သင်သည်ဆာရှာ၏နက်ရှိုင်းသောလည်ချောင်းအတွင်းဥစ္စာ၏ tool ကိုသင်ျဂွိုဟျနိုငျပါသညျ!
ဆာရှာ Grey ကများ၏, ပျော့ပျောင်းသောစိတ်အားထက်သန်ခြင်း, ပျော့ပျောင်းပါးစပ်ခြောက်သွေ့တဲ့သငျသညျနို့စို့ဘို့စောင့်ဆိုင်းနေခြင်းဖြစ်သည်! ဤသည်မှာရှိပါတယ်
တိုက်ရိုက်သူမ၏ pouty နှုတ်ခမ်းအဖြစ်လျှာကိုကနေပုံသွင်းခဲ့။ ဒါကလက်တွေ့5½ဇာတိပကတိအား stroker ဖြစ်ပါသည်
ရိုးရှင်းစွာဆာရှာ၏ blowjobs တူသောခံစားရလိမ့်မည်ဟုသဘာဝအစုတ်ယူခြင်းအတွက်တစ်ခုတည်းသောအပေါက်နှင့်အတူ။
•စူပါဆွဲဆန် ့. နှင့်ပျော့
•အသုံးပြုမှုနေချိန်မှာတောင်မှပြင်းထန်သောသဘာဝအစုတ်ယူခြင်းများအတွက်လူပျို entry ကို
•အများဆုံး lifelike ခံစားမှုပေးဖို့ UR3 လက်တွေ့ကျကျအသားအရေကို အသုံးပြု. Created
•ဒါကြောင့်5ဖြစ်ပါတယ်½အရှည်လက်မ
•ဆာရှာ Grey ကယ့်ကို XXX ကြယ်ပွင့်ကနေတိုက်ရိုက်ပုံသွင်း
ဆာရှာ Grey ကထဲကနေအတိုငျးပါးစပ် stroker •
အခုတော့ဆာရှာ Grey ကဥစ္စာဖြစ်လာပါလိမ့်မည်! ဒီနေ့ရဲ့ XXX ကအပူဆုံးရုပ်ရှင်များတွင်, သင်ယခုသူမ၏ချစ်ပြီး
ဒီအံ့သြလောက်အောင် crossover porn ကြယ်ပွင့်ကိုသင်အစဉ်အဆက်အပူဆုံး blowjob ပေးမညျ! ဒီအဆာရှာ Gery
နက်ရှိုင်းသောလည်ချောင်း Pocket Pal Stroker တိုက်ရိုက်၏ကျော်ကြားစူပါပျော့နှုတ်ခမ်းကနေပုံသွင်းထားပြီး
သငျသညျ stroker နှင့်ပြည့်ဝ၏နက်ရှိုင်းသော-လည်ချောင်းအတွေ့အကြုံကိုပေးသကဲ့သို့ Starlet ။
ရိုးရှင်းသောသင်တန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ်ကျသောဆာရှာ Grey ကနက်ရှိုင်းသောလည်ချောင်းအိတ်ကပ် PAL stroker ခြော့
ဒီ stroker လိင်ကစားစရာ၏လက်တွေ့နှင့်ပျော့ပျောင်းသောခံစားမှု။ ပူပြင်း blowjob stroker သုံးပြီးလုပ်ထားပြီး
doc ဂျွန်ဆင်တို့ကမူပိုင်ခွင့် UR3 ပစ္စည်း lifelike အောင်အဘို့အကြောင်းပါလိမ့်မယ်လှလှပပတုအသားအရေ
stroker အတွေ့အကြုံကို။ ဤသည်ဆွဲဆန် ့. နှင့်ပျော့ပျောင်းဖြစ်ပါသည်ဤအရပ်မှတဦးတည်းကဒီပြင်ပလွယ်ကူတဲ့ချုပ်ကိုင်ဖမ်းပြီးနိုင်ပါတယ်
stroker အဖြစ်တူတဲ့ဆလိုက်နှငျ့သငျထိုးနေကြသည်အဖြစ်အမှန်တကယ် blowjob လောကဓာတ်!
အသုံးပြုသူများကဒီဆာရှာမီးခိုးရောင်နက်ရှိုင်းသောလည်ချောင်းအိတ်ကပ် PAL stroker လျှာကိုနှင့်နှုတ်ခမ်းလမ်းကိုချစ်ကြလိမ့်မည်
နက်ရှိုင်းကိုသင်လြားအပေါငျးတို့သညျကြှနျုပျတို့၏ရိုး massaging stroker ၏ဝင်ရောက်စီးနင်းအပျော်အပါးကုန်းခံစားရပါလိမ့်မယ်
စဉ်ကဤ stroker လိင်ကစားစရာ၏သဘာဝအစုတ်ယူခြင်းသင့်ရဲ့ခြောက်သွေ့တဲ့ milking အတွက်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျအပျော့စားဆပ်ပြာ, ရေ, သို့မဟုတ်လိင်ကစားစရာတွေနဲ့အတူသင်တို့အဆာရှာမီးခိုးရောင်နက်ရှိုင်းသောလည်ချောင်း stroker ရှင်းလင်းနိုင်ပါတယ်
သန့်ရှင်းရေး။ ညင်ညင်သာသာသင့်ရဲ့ stroker ခြောက်သွေ့သောဖြစ်လာနိုင်အောင်မှုတ်။
Belladonna ၏အိတ်ကပ် Stroker အင်္ဂါရပ်များ
Belladonna သင် stiffy လိုအပ်ပါတယ်!
သငျသညျအစဉျအမွဲကငါ့ထံသို့ boning ကဲ့သို့ဖြစ်လတံ့သောအရာကိုထင်ရှိပါသလား? ယခုတွင်သင်သည်ဝက်အူပိုင်ခွင့်ရှိသည်
ငါ့ကို nastiest ဖြစ်နိုင်သောလမ်းအတွက်! သတ္တုတွင်းများ၏ပွင့်လင်း puffy နှုတ်ခမ်း Pull အဖြစ်သင့်ရဲ့ဝင်ရိုးစွန်းလက်ယာနစ်
ဒါကြောင့်တဦးတည်းနက်ရှိုင်းသောငါ့ကိုအတွင်း၌သင်္လိုပဲခံစားရလိမ့်မည်! stroker ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ပြီးဤသည်ကိုခြောက်လက်မ
ဘဝကဲ့သို့ကြောင်း UR3 အသားအရေအတူ။ ရည်ရွယ်ချက်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရန်ပွင့်လင်းကြီးစွန်းနှင့်တကွကြွလာ။
အများဆုံးအပျြောအပါးမှသကဲ့သို့• Chambered အတွင်းနံရံများ
• Belladonna, စင်ကြယ်နေခြင်းကိုကူညီ SIL-A-Gel antibacterial စွဲလမ်းနှင့်အတူတချို့က
•အစစ်အမှန်ခံစားမှုပေးသကဲ့သို့အသက်နှင့်တူ UR3 ပစ္စည်းသုံးပြီးလုပ်
•ခရီးသွားလာမှုအတွက်ကြီးမြတ်ကြောင်းကို Compact အရွယ်အစား
•အတိအကျအိတ်ကပ် stroker ပုံတူကိုတိုက်ရိုက် Belladonna ကနေပုံသွင်း
•ကျယ်ပြန့် 2.5 လက်မနှင့်6လက်မရှည်လျား stroker
ဤသည်ကို XXX ကြယ် kinkiest အမြဲဘယျအခြိနျမှာကြှနျတျောတို့အဘယ်သူမျှမကိစ္စနှင့်အတူဆင်းရတဲ့အဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ
သင်အလိုရှိ! Belladonna တိုက်ရိုက်ကြှနျမဌာန၏တိုင်း၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ box ထဲကပုံသွင်းထားပြီး
တစ်ခုတည်း texture နှင့်ခြံသင်သည်ဤအရပ်မှ Ultra-လက်တွေ့ကျကျ UR3 အသားအရေပစ္စည်းအတွက်ပါလိမ့်မယ် recreated ထားပြီး
အတှေ့အကွုံသင်တို့တွင်အပျော့နှုတ်ခမ်း clit နှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပွတ်သပ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ညာဘက်ထိုပြည်၌သင်တို့သည်သူမ၏နှင့်အတူရှိသောကြိုက်တယ်
သငျသညျအိမျပွ stroking နေကြသည်အဖြစ် Chambered အတွင်းနံရံများ, သင်တို့အတိုင်ခြော့ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျ add နိုင်ပါတယ်
အကြိုက်ဆုံးဥစ္စာ၏အာဒံနဲ့ဧဝကို lube နှင့်ငျသညျဤအသီးအသီး slick လက်မမှာဝမ်းသာပီတိပါလိမ့်မည်
အလွန်တင်းကျပ်စွာအိတ်ကပ် stroker ။ ၎င်း၏လွယ်ကူတဲ့ချုပ်ကိုင် ribbed အပြင်ပန်းအပေါ်သာလွန်လက်ကိုင်ပေးသွားမှာပါ
ချိုမြိန် stroker အဖြစ်င်း၏ပွင့်လင်းဆုံးကိုသင်အလွယ်တကူအဲဒါကိုရှင်းလင်းဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်အထူးသဖြင့် stroker
ဒီအိတ်ကပ် stroker စောင့်ရှောက်ခြင်းအတွက် SIL-A-Gel antibacterial စွဲလမ်းကိုကူညီပါသုံးပြီးလုပ်ထားပြီး
ယခုတွင်သင်သည်သူမ၏နောက်ဆုံးထုတ် XXX က DVD ကိုအဖြစ်နှင့်အတူဥစ္စာ၏အနှစ်သက်ဆုံး Belladonna စိတ်ကူးယဉ်ဖြည့်စွက်နိုင်ပါတယ်
ကြှနျမကောင်းစွာအဖြစ်ပူအိတ်ကပ် stroker ။
Tenga တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ Cool အမျိုးသား SexToys အားဖြင့်နှစ်ချက် Hole ဖလားအိတ်
Tenga ၏အင်္ဂါရပ်များ Hole တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ Flip
ဒါဟာသုံး lube နမူနာနှင့်တကွကြွလာ
•ဒါဟာရှုပ်ထွေးတဲ့အပျော်အပါးနံရိုး၏ပုံစံများ, ticklers နှင့်ပြန်တယ်နဲ့အတူအံ့သြလောက်အောင်စီတန်းဖြစ်ပါတယ်။
•ယင်း 3rd ဖိအားအမှတ်ကိုစူပါတရားစွဲဆိုအော်ဂဇင်များအတွက်အစွန်အဖျားကိုလှုံ့ဆော်ပါလိမ့်မယ်
•ဒါကြောင့် blowjob နဲ့တူကြောင်းအာရုံနို့စို့ဖန်တီး
•အမျိုးသားတညျးရာ lube ထည့်သွင်းဘို့အဖြစ်ရိုးရှင်းသန့်ရှင်းရေးအတှကျအဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်
•ဒါကြောင့်ဆီလီကွန်အဖြစ်ပစ္စည်းတူညီကြောင်းအလွန်အမင်းအကြမ်းခံများနှင့်ပျော့ပျောင်းသော TPR သုံးပြီးဖန်ဆင်းထားသည်
•ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ high- များအတွက်လူကြိုက်များကြောင်း Tenga လို့ခေါ်တဲ့ကုမ္ပဏီကဂျပန်ထုတ်လုပ်နေသည်
•ဒါဟာသင်ကြားပို့ချစာအုပ်ငယ်အပြင်သုံး lube နမူနာနှင့်တကွကြွလာ
ဒါဟာ Tenga Flip ပေါက်ဘာမျှမပုံပေါ်မှုကြောင့်အရာမှကြီးမြတ်ဒီဇိုင်းနှင့်ဟန်ချက်ညီတဲ့ function ရှိပါတယ်
ကြောင်းဆက်လက်မယ်လို့ထပ်တလဲလဲအသုံးပြုသောအခါအဖွင့်အနီးဖြတ်ပေမယ့် Tenga Hole Flip စတင်ရန်
၎င်း၏အတွင်းပိုင်းများအတွက်အထူးသဖြင့်အင်ဂျင်နီယာပီပီက stimulator ပုံစံကို အသုံးပြု. စီတန်းထားပါတယ်
နှစ်သက်ဘွယ်သော။ သငျသညျကြီးမား, လှိုင်းအတက်အကျဒီဇိုင်းများကိုအသုံးပြုပြီးဖုံးလွှမ်းခဲ့ကြကြောင်းအပျော်အပါး nubs တှေ့လိမျ့မညျ
ticklers ribbed နှင့်စာရေးပို။ ယင်း၏အဆုံးမှာနယ်ပယ်အပျော့ကို အသုံးပြု. ဖုံးလွှမ်းတောင်မှအများကြီးပိုကြီးတဲ့လည်းမရှိ
တဦးတည်းအဘို့မိမိတို့ရိုးတံအပေါ်ပတ်လည်လည်နိုင်ပါတယ်ဤအရပ်မှလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောပုံစံကို အသုံးပြု. စီတန်းခဲ့
ဒါဟာအဖြူရောင်စက်ဝိုင်းနှင့်အတူမှတ်သား masturbator- ၏ဘက်မှာ3ဖိအားအချက်များနှင့်တကွကြွလာခြင်းနှင့်ခွင့်ပြု
့တိုးမြှင့်ပျော်မွေ့ဘို့ blowjob ကဲ့သို့ဖြစ်၏ခံစားရတယ်။
Tenga တညျးရာတစျခုဖွင့်နိုင်သည်ကိုထိုကဲ့သို့သောအခြေစိုက်စခန်းမှာ hinged ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအသုံးပြုသူများအတက် lube ခွင့်ပြု
ဒီ Tenga တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကမယုံနိုင်လောက်အောင်နှံ့နှံ့စပ်စပ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ပွင့်လင်းပြန်ချော်။ ရိုးရှင်းစွာအကျားကန်
ဤသည်အထီးတညျးရာရဲ့ရှုထောင့်တာရှည် width ကို3လက်မခုနစ်လက်မပါဝင်သည်။ ဤ
ဆီလီကွန်အဖြစ်ပစ္စည်းအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်နှင့်အဘို့အပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အဖြစ်ပျော့ကြောင်း TRP သုံးပြီးဖန်ဆင်းထားသည်
အသုံးပြုသောခက်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဆီလီကွန်နဲ့ဆင်တူ, TPR အဖြစ်ကောင်းစွာစေးအခမဲ့ hypoallergenic ဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည် Flip Hole တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဂျပန်တွင် Tenga ကထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးဒီကုမ္ပဏီ
ဂျပန်တွင်လိင်ကစားစရာ၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ။ Tenga နှင့်အတူ၎င်းတို့၏အထင်ကြီးဂုဏ်သတင်းရရှိထားပြီးပါပြီ
ဒါဟာအိမ်မှာယောက်ျားတို့အတွက် Hole တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ Flip Tenga သုံးစွဲဖို့အာဒံနဲ့ဧဝတို့ဖွငျ့အကြံပြုသည်,
လမ်းမပေါ်တွင်, ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေများအတွက်အဖြစ် foreplay များအတွက်စုံတွဲများသည်။
ဤသည် Tenga တညျးရာကအာဒံနဲ့ဧဝတို့ကရေ-based လိင်ပြွန်နှင့်အတူဿုံအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ တစ်
ပူနွေးတဲ့ဆပ်ပြာဖြေရှင်းချက်ကသန့်စင်လိင်များအတွက်အာဒံနဲ့ဧဝကို အသုံးပြု. ဆင်းပက်ဖျန်းရပါမည်
လိင်ကစားစရာ။ ဤသည်အထီးတညျးရာလုံးဝကြိုတင် Tenga သိုလှောင်ဖို့အခြောက်မှခွင့်ပြုသင့်
ဥစ္စာတခြားလိင်ကစားစရာစုဆောင်းခြင်းနှင့်အတူ stroker ။
အမျိုးသားတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း simulation ကျောက်စိမ်းလိင်အင်္ဂါလိင် Toy ငါ့ကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲ
ငါ့ကိုအမျိုးသားတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း simulation ကျောက်စိမ်းလိင်အင်္ဂါလိင်ကစားစရာဒီဇိုင်းရေးဆွဲပါ။
ဒီတစ်ခုပြီးပြည့်စုံသောဖြစ်ပါသည်, ဘယ်သူမှအစဉ်အဆက်သူတို့ excident ကရှာတွေ့သည့်အခါကသိလိမ့်မယ်။
သင်တကယ်ကိုဒီတစ်ခုအခွင့်အလမ်းပေးသင့်တယ်ထက်, အရည်အသွေးအဘို့အသွားပေမယ့် Don ရဲ့ pussy ကစားစရာ၏ရူပနဲ့တူချင်လျှင်, ကိုယ့်ကိုသင်နေရာတိုင်းအသုံးပြုစောင့်ရှောက်မည်သေချာဖြစ်၏။
Fleshlight လုံသင်တန်းယူနစ်အမျိုးသားတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, ပန်းရောင်သမ္မတကတော်
ဤသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန်မှသကဲ့သို့လုံသင်တန်းယူနစ် Fleshlight တီထွင်ခဲ့သည်
12 မီလီမီတာ 15 ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နှင့်အရှင်အတော်လေးအလင်းကြောင်းကိုတူးမြောင်းအချင်းနှင့်အတူ။ ၎င်း၏အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်ရှိပါတယ်
ထိုသို့သောအားဖြင့်ပြေးရသောအလွန်အမင်းသိပ်သည်း texture ဖွဲ့စည်းအချင်းချင်းတော်တော်လေးနီးစပ် positioned ခဲ့
တူးမြောင်းတလျှောက်လုံး။ လုံသင်တန်းယူနစ် Insert သာနဲ့ပေါင်းပြီးရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်
Fleshjack ခံနိုငျရညျဂျက်မြည်းနှင့် Fleshlight ပန်းရောင်သမ္မတကတော် orifices ။
၎င်း၏အလွန်အမင်းသိပ်သည်းထုရိုက် texture လိင်တံအပေါ်သိသိသာသာပြင်းထန်သောဆွလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။ ထိုမှတပါး,
အတော်ကြာနည်းနည်းလက်ချောင်းထိပ်, နှိပ် massaging, နှင့်ဝင်ရိုးပြုစုစောင့်ရှောက်လျှင်အဖြစ်လာပြီးအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်,
မိနစ်အတွင်းအင်အားကြီးအော်ဂဇင်။ အော်ဂဇင် delay လုပ်ခြင်း, တစျမလွှဲမရှောင်တိုတောင်းယူပြီးလိုအပ်ပါတယ်
arousal တံခါးခုံကိုသူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံတိုးမြှင့်မှုအတွက်သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်တဦးတည်းကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ
ဆွသူတို့တစ်တွေအထူးသဖြင့်အချိန်အနည်းဆုံးသည်းခံနိုင်။ သုံးပြီး masturbating နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်သူများသည်
ထူထပ် positioned ပြန်တယ်ပျော်စေသုက်ပိုးနှင့် lube အဖြစ်အတန်ငယ်အချိန်ကုန်ပါလိမ့်မည်
cleanup စဉ်အတွင်းဖြည့်စွက်ဘက်ထွက်။ ၎င်း၏ခြောက်သွေ့အချိန်ပျမ်းမျှထက်အတန်ငယ်ရှည်ပါလိမ့်မည်ဒါပေမယ့်
အားလုံး Fleshlights အကြားနှင့်ဤအရပ်မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်လေ့ကျင့်ရေးအတှကျစံပြကိရိယာဖြစ်သည်။ သုံးတဲ့အခါ
မှန်မှန်, အချိန်မတန်မီ orgasm တစ်အတိတ်အရာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီအလုံသင်တန်း fleshlight ရှိပါတယ်
Tenga ဥ Twister တညျးရာ Cool အမျိုးသားလိင် Toy
တိုင်း stroker ထူးခြားသောကြောင်း stimulator ဒီဇိုင်းပါရှိပါတယ်။
ဒါဟာအခမဲ့ lube နမူနာပါဝင်သည်!
ဂျပန်တွင်ရရှိနိုင်လူကြိုက်အများဆုံးတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေများထဲတွင် Tenga ဥခရီးဆောင်ဖြစ်ပါသည်, သတိပညာ,
•နေ့စဉ်ကြက်ဥအမျိုးမျိုးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထူးခြားတဲ့ Simulator ကိုတပ်ဆင်ထား
•ဆွဲဆန် ့. နှင့်ပျော့ပျောင်းသောဂျယ်လီသုံးပြီးဒီဇိုင်း
•နေ့စဉ်ကြက်ဥရေ-based ကြောင်းလိင် lube နှင့်အတူထုပ်ပိုးခေါင်းအုံးတို့ပါဝင်သည်
•ဤသတိပညာရှိတညျးရာအသုံးပြုရန်အဖြစ်ကဆမ်းခရီးသွား friendly- ဖြစ်ပါတယ်
•ဆွအကျယ်အရှည် 2.25 လက်မနှင့်2လက်မ
•ဂျပန်လိင်ကစားစရာထုတ်လုပ်သူကြောင်းကျော်ကြား Tenga ခြင်းဖြင့်ဒီဇိုင်း
အားလုံးခြောက်လမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အထူး stimulator ဒီဇိုင်းများ feature ပါလိမ့်မယ်။ ၎င်း၏ Wavy အလျားလိုက်နံရိုးရှိပါတယ်
နှင့် Twister ဒေါင်လိုက်နံရိုးတွေဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်။ ကျပန်းလေပြင်းပုံစံများအားဖြင့် featured နေကြတယ်
တောက်ပခြင်းနှင့်ပင့်ကူထူးခြားတဲ့ Web-တူသောပုံစံများရပါလိမ့်မယ်။ ၎င်း၏ clicker အသေးစားသုံးပြီးဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်
အပျော်အပါး nubs နှင့်၎င်း၏ Stepper ထွက် notched ဖြစ်ကြောင်းတစ်ပိုင်းစက်ဝိုင်းနှင့်အတူကြွလာ။
ရိုးရှင်းစွာအများထဲမှတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ပါက crack ။ ၎င်း၏ကြက်ဥအဖြစ်အတွင်းပိုင်း lubes ၏ခေါင်းအုံးဗူးများပါဝင်သည်
၎င်း၏ပလပ်စတစ်ထုတ်ထို့နောက်အဆိုပါ lube ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ကအသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီထည့်ပါ။
သင့်ရဲ့အထိခိုက်မခံအစွန်အဖျားက stimulator မောင်းနှင်နေသည်ကဲ့သို့ကွယ်ပျောက်လိမ်။ ဒီ Tenga တညျးရာရှိခဲ့ပွီးသကဲ့သို့
ဆွဲဆန် ့. နှင့်ပျော့ပျောင်းသောဂျယ်လီသုံးပြီးဒီဇိုင်း, တဦးတည်းပင်အဘို့မိမိတို့ရိုးကဒီတညျးရာဆွဲချနိုင်ပါတယ်
ဤအတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတစ်ခါသုံးပစ္စည်းများအဖြစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲကြသည်နှင့်အမျှထို go- အပေါ်အထီးအဘို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း
ဒီ Tenga ဥတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏အရွယ်အစားအလျား 2.25 လက်မနှင့်အနံအတွင်းရှိ2လက်မဖြစ်ပါတယ်။
အာဒံနဲ့ဧဝတို့နှစ်ဦးစလုံးသည်ဤ Tenga ဥ6အထုပ်လိုအပ်သူကိုအထီးအဘို့အကြောင်းအကြံပြု
တိုင်းကြက်ဥတညျးရာရေ-based ကြောင်းလိင် lube င်တစ်ဦးခေါင်းအုံးဗူးများပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်။
ထိပ်တန်း Category ေရြးပါ အထီးတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ (10) Uncategorized (1) webcamsex (245) ယောက်ျားလေးများ (4) 18_22 (2) အဖြူ (2) စုံတွဲများ (8) Big_Tits (5) ဆံပင်ရွှေရောင် (3) Fetish-SM (22) 18_22 (1) Big_Tits (4) ဆံပင်ရွှေရောင် (4) လက်တင် (2) အဖြူ (11) ဂေး (20) 18_22 (4) ဆံပင်ရွှေရောင် (1) လက်တင် (4) အဖြူ (11) မိန်းကလေးများ (107) 18_22 (9) (2) အာရှ Big_Tits (45) ဆံပင်ရွှေရောင် (30) လက်တင် (2) အဖြူ (19) ပူပြင်းတဲ့ပရောပ (15) Big_Tits (7) ဆံပင်ရွှေရောင် (4) အဖြူ (4) လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုထောက်ခံ (3) အဖြူ (3) ရင့်ကျက် (51) Big_Tits (20) ဆံပင်ရွှေရောင် (19) ပူပြင်းတဲ့ပရောပ (1) လက်တင် (3) အဖြူ (8) Shemale (6) (1) အာရှ ဆံပင်ရွှေရောင် (2) လက်တင် (3) Transvestite (9) 18_22 (1) (5) အာရှ လက်တင် (1) အဖြူ (2)
ထိပ်တန်း 10 အကောင်းဆုံးတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ
လက်တွေ့ဆာရှာ Grey ကနက်ရှိုင်းသောထိုးဖောက်မှုတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ ... ဆာရှာ Grey ကနက်ရှိုင်းသောထိုးဖောက်မှု Pussy & မြည်းသည် (3,647)
အကြှနျုပျ၏မြည်းကိုလိင်တံ Stroker ဖြည့်ပါ ဒီနေရာမှာလည်းငါ့အမြည်းကိုလိင်တံ Stroker လျှောဖြည့်ပါ၏အင်္ဂါရပ်များ ... (2,646)
Nasswalk ထံမှ silicone ကတ္တီပါ Touch ကို Clit Licker vibrator လိင်ကစားစရာအရွယ်ရောက်လိင်ကစားစရာလိင်ကစားစရာအရွယ်ရောက်ကစားစရာ ... (2,452)
doc ဂျွန်ဆင်တညျးရာဆာရှာ Grey က Ur3 Cream Pie ... doc ဂျွန်ဆင်တညျးရာဆာရှာ Grey က Ur3 Cream Pie Pocket Pussy ... (2,395)
စအိုတညျးရာ Fleshlight လိင်တူချစ်သူ Fleshjack ကျွန်တော်တို့ရဲ့စအိုနှင့်လိင်တူချစ်သူချစ်သူများအဘို့အ te fleshjack masturbater ဖြစ်ပါတယ် ... (2,187)
အမျိုးသားတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း simulation ကျောက်စိမ်းလိင်အင်္ဂါလိင် Toy ငါ့ကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ငါ့ကိုအမျိုးသားတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း simulation ကျောက်စိမ်းလိင်အင်္ဂါလိင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ... (2,172)
ကနေအမျိုးသမီးတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေရန်ဂျက်စီကာ Drake ရဲ့လမ်းညွှန် အမျိုးသမီးတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ DVD ကိုဂျက်စီကာ Drake ?? s ကိုလမ်းညွှန်ရန်ဂျက်စီကာ Drake ?? s ကိုလမ်းညွှန် ... (2,062)
Doc သို့ဂျွန်ဆင်ထံမှလက်တွေ့ Jessie Andrews က Stroker အာဒံကို & ဧဝကိုအမျိုးသားများရဲ့လိင်ကစားစရာအမျိုးသားများရဲ့လိင်ကစားစရာအမျိုးသားများရဲ့ ... (1,998)
ဆာရှာ Grey ကနက်ရှိုင်းသောလည်ချောင်း Pocket Pal အခုတော့ဆာရှာတို့က Grey ကနက်ရှိုင်းသောလည်ချောင်း Pocket Pal ၏အင်္ဂါရပ်များ ... (1,854)
Black ကပလတ်စတစ် Fleshlight Fleshlight ကနေတောင်ပေါ်ကရေချိုးခန်း Fleshlight ပန်းရေချိုးခန်းတောင်မှာ (1,745)
စတိုးအသွင်အပြင် & WooCommerce နှင့်အတူတညျဆောကျ.